File compress from 1.68 GB to 652 KB — MYSTERY ZILLION
370 Mobile Devlopment
129 other mobile
File compress from 1.68 GB to 652 KB
August 2012 edited August 2012 in Tech News
ကျွန်တော်မေးချင်တာက7-zip နဲ့ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို Compress လုပ်ရင် ဘယ်လောက် percentage အထိ file size သေးသွားနိုင်သလဲ။ ကျွန်တော် compress လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရှိတယ်။ နကိုဖိုင်ဆိုက်က 1766,016 KB = 1.68 GB ရှိတယ်။Compress လုပ်လိုက်တော့ file size ဘယ်လောက်သေးသွားတယ်ထင်လဲ? Compress လုပ်ပြီးတဲ့ file size က ယုံလားတော့မသိဘူး 652KB ဘဲရှိတယ်။ Compression Ratio က 0%။ ဘာကြောင့်အဲဒီလောက်တောင်သေးသွားလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တောင် တော်တော်အ့ံသြသွားတယ်။ Decompress ပြန်လုပ်တော့ 1.68 GB ဘဲပြန်ရ တယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီ့ဖိုင်ကို upload လုပ်ထားတယ်။ ကိုယ်တွေ့ကြုံမှယုံမယ် ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ပါ။ virus မဟုတ်ကြောင်း 100% အာမခံပါသည်။ ဒါနဲ့ ဘာကြောင့်အဲဒါဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာ ရှင်းပြ ပေးကြပါ။ http://www.mediafire.com/?3becfu53llo86fc
AKB < KARA ? lol
It'sapsp game actually. AKB 48 is the name of the singer idol group in Japan. They made that game, that is dateing stimulating game. Every guy'll love it, you know. Just try that and you'll be addicted. But unfortunately that is in chinese language translated from japanese. Original language is japanese, i don't know if there is english version. Hope you enjoy it.